Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah - Warbixinta Sannadlaha ah
Sannadle, EAI waxay soo saartaa warbixin saameyn ku leh oo muujinaysa shaqada nolosha beddelaysa iyo hal-abuurka ay sameeyeen shaqaalaha caalamiga ah ee EAI. Warbixinnada waxay ka sheekeeyeen safarkii EAI ee ballaarinta iyo la-qabsiga iyo la-dhaqanka bulshada.
In 2020, waxaan u dabaaldegnay sanad-guuradeenna 20-aad iyadoo aan u soo kaceyno caqabadaha aan horay loo arag ee cudurka caalamiga ah ee COVID-19. Warbixintani waxay muujineysaa qaar ka mid ah sheekooyinkeenna 20-kii sano ee la soo dhaafay, oo muujinaya sida ay u qaabeeyeen ururka sida uu yahay maanta. Maaddaama aan koray oo aan isbeddelay, mid ka mid ah waxyaabaha aan xoogga ku leenahay waa adkaysiga iyo la-qabsiga; aafadu waxay muujisay sida aan u noqon karno dabacsanaan iyo hal abuurnimo.
In 2019, waxaan adkeynay ballanqaadkii aan sameynay tan iyo aasaaskeenii inaan ka shaqeyno iskaashi dhow oo lala yeesho daneeyayaashayada adduunka oo dhan si wadajir ah, aan u qabanno mudnaanta, khibradaha, fikradaha, iyo xalalka keenaya abuuritaanka macno iyo saameyn dhab ah. EAI hadda waxaa loo aasaasay sidii hoggaamiye feker caalami ah oo muhiim ah meelaha aan khibradda u leenahay: Dhisidda Nabadda & Is-beddelka xag-jirnimada, Dowladnimada & Ka Qeybgalka Madaniga, iyo Horumarinta Sinnaanta Jinsiga & Awoodsiinta Haweenka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida aan u sii wadno isbeddellada bulshada!
In 2018, EAI waxay la kulantay koritaan la taaban karo iyo isbeddelo. Waxaan cabiray oo ku celcelinay tusaalaheena guuleysta ee dhanka kale ee Waqooyiga Nigeria ilaa koonfurta Filibiin iyo Afka-Soomaaliga ku hadla Bariga Afrika. Waxaan balaarinay Voice for Peace (V4P) ilaa laba dal oo cusub. Waxaan leenahay Madaxweyne cusub iyo agaasime guud, waxaana ka wareejinay xarunteena San Francisco ilaa Washington, DC Ugu dambeyntiina, waxaan cusbooneysiinay calaamadeynteena oo waxaan dib ugulaabanay joogitaankeena dhijitaalka ah muuqaal cusub oo firfircoon oo muujinaya shaqada saameynta sare ee EAI.
In 2017, EAI wuxuu sii waday inuu maal galiyo dumarka iyo gabdhaha mashruucyada burburinaaya oo udhaxeeya la dagaalanka shaqaaqada lammaanaha ah ilaa xirmooyinka wadooyinka ee ku biiraya dowlada iyo hogaaminta ka hortaga xagjirnimada rabshadaha.
In 2015, EAI waxay ku dhistay shaqadeeda la dagaallanka xagjirnimada rabshadaha wata ee meelaha ugu fog ee Sahel iyadoo la abaabulayo dhalinyarada, haweenka, iyo ragga si ay isugu yimaadaan si ay u faafiyaan farriimaha nabadda iyo dulqaadka.
In 2014, EAI waxay ka bilawday Peace Caravan aagagga qabaa'ilka ee Pakistan, iyadoo la ballaarinayo saameynta barnaamijkeeda raadiyaha iyadoo la isugu keenayo bulshada agagaarka muusikada tooska ah, farshaxanka, iyo dhacdooyinka isboortiga.
In 2013, EAI waxay soo saartay AREWA24, telefishanka dayax gacmeedka afka ingiriisiga 24/7 ee waqooyiga Nigeria. Qaab dhismeedka isku-dhafan ee leh qaab-dhismeedka gudaha lagu dhisay oo looga gudbayo deeq-lacageedka oo loo wareejiyo hay'ad ganacsi oo si gaar ah loo leeyahay oo waarta, tan waxay ka dhalatay iskaashi lala yeeshay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka.
In 2012, EAI waxay iskaashi la yeelatay Aqoon-isweydaarsiga Sesame si loo soo saaro oo loo sii daayo taxane raadiyo asal ah oo ka socda Afghanistan. Muujinta Muppets ka Sesame Street, heesaha carruurta asalka ah ee Afghanistan, cayaaraha iyo sheekooyinka, Beerta sisinta ku hawlan oo wax barta carruurta da'da yar ee waddanka oo dhan, taas oo xakameysa nusqaamaha muhiimka ah ee garashada carruurta, bulshada, iyo shucuurta.
Warbixinno saamayn hore ah ayaa laga heli karaa halkan: 2011/2010/2008/2007/2006.